Ilungiswe ngokugcwele i-Suite yesimanje ye-1Bdrm eduze ne-Beach - I-Airbnb
Ilungiswe ngokugcwele i-Suite yesimanje ye-1Bdrm eduze ne-Beach
Texas City, Texas, i-United States
Phumula futhi ujabulele lokhu kuthula, okulungiswe ngokuphelele i-Luxury 1 bdrm Suite. Itholakala kalula e-I45, imizuzu engu-3 ukusuka e-Largest Lagoon e-TX nase-15 Mins ukusuka e-Galveston Beach.
Le Gem Efihlekile ilungele noma yikuphi ukuvakasha futhi yamukela abantu abahamba ngebhizinisi. Inazo zonke izinto zikagesi ezintsha, umshini wokuwasha/umshini wokomisa, Ifenisha yesimanje, i-Garden tub, ne-Luxury Queen Bed ukuze ujabulele ukuphumula okuhle ebusuku. Ikhishi elinakho konke, amathawula, amashidi ne-wifi kufakiwe!
Indawo Yokubhukuda Nendawo Yokuzivocavoca, leli fulethi lihlalisa izivakashi ezingaba ngu-4.
Isanda kulungiswa, zonke Izinto Ezintsha w/ Umshini Wokuwasha & Umshini Wokomisa zifakiwe. Indawo yokusebenzela ifakiwe kochwepheshe abasebenzayo. Isivakashi sizokwazi ukufinyelela yonke ifulethi. 1 Umbhede omkhulu ulala 2, 1 Usofa Olalayo, Ukungena endaweni yokubhukuda kanye Nendawo Yokupaka yamahhala esesayithini. Kuhlanzeke Kakhulu futhi kuhlanzwe nge-sanitizer Ukuvikelwa Okwengeziwe ngokumelene ne-Covid-19.
Sitholakala imizuzu engu-3 ku-acre Clear Lagoon engu-12 e-Texas City, kanye ne-Tanger Outlet ukuhlangabezana nazo zonke izidingo zakho zokuthenga. Imizuzu engu-15 kude ne-Galveston Island, Beach. Lapho ungajabulela i-Moody Gardens, i-Pleasure Pier, nokuhambahamba okude ku-Strand.
Ezinye izindawo eziseduze yilezi:
I-Kemah BoardwalkwagenA Space Center Houston
I love to travel and enjoy the beauty of Nature!
Ngihlala endaweni ngakho ngicela uthintane nami ngokuqondile enkundleni yemiyalezo ye-Airbnb nganoma yimiphi imibuzo ongaba nayo. Sicela ungaye ehhovisi eliqashisayo nganoma yimiphi imibuzo noma ukukhathazeka.
Hlola ezinye izinketho ezise- Texas City namaphethelo